လွှမ်းပိုင်နဲ့ ဘန်နီဖြိုးသီချင်းသစ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ ထိုင်ဝမ်မော်ဒယ် ဂျက်ဆီကာဘေဘီဖတ်စ် | Buzzy
လွှမ်းပိုင်နဲ့ ဘန်နီဖြိုးသီချင်းသစ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ ထိုင်ဝမ်မော်ဒယ် ဂျက်ဆီကာဘေဘီဖတ်စ်
သူမဟာ တင်ပါးလှလွန်းလို့ မြန်မာလူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးပြီးသားပါ
လက်တလော လူမှုကွန်ယက်မှာတော့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ ဘန်နီဖြိုးတို့ရဲ. သီချင်းသစ် MTV မှာ ထိုင်ဝမ်မော်ဒယ် ဂျက်ဆီကာ ဘေဘီဖတ်စ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ် ဆိုပြီး V7 Entertainment က တင်ထားတဲ့ သတင်းလေး နာမည်ကြီးနေပါတယ်။
လကျတလော လူမှုကှနျယကျမှာတော့ လှမျးပိုငျနဲ့ ဘနျနီဖွိုးတို့ရဲ. သီခငျြးသဈ MTV မှာ ထိုငျဝမျမျောဒယျ ဂကျြဆီကာ ဘဘေီဖတျဈ ပါဝငျသရုပျဆောငျမယျ ဆိုပွီး V7 Entertainment က တငျထားတဲ့ သတငျးလေး နာမညျကွီးနပေါတယျ။
V7 Entertainment ရဲ. ဖော်ပြချက်အရ သူမဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ရောက်ရှိလာပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ မှာ စတင်ရိုက်ကူးသွားမှာလို့ သိရပါတယ်။ သူမဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်ကတည်းက တင်ပါးလှလွန်းလို့ မြန်မာလူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေသူပါ
V7 Entertainment ရဲ. ဖျောပွခကျြအရ သူမဟာ ဖဖေျောဝါရီလ ၂၆ ရကျနမှေ့ာ ရောကျရှိလာပွီး ဖဖေျောဝါရီလ ၂၇ မှာ စတငျရိုကျကူးသှားမှာလို့ သိရပါတယျ။ သူမဟာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈလလောကျကတညျးက တငျပါးလှလှနျးလို့ မွနျမာလူမှုကှနျယကျမှာ နာမညျကွီးနသေူပါ
စပ်ဆက်အကြောင်းအရာ >> တင်ပါးလှလွန်းလို့ လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ ထိုင်ဝမ်မော်ဒယ်မလေး
Source : V7 Entertainment
Photo : 蔡昀潔Jessica
ရေသူထီး ရေသူမတွေ တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ မယုံကြည်သူတွေအတွက် ဗီဒီယိုတဲ့
ကောင်မလေးတယောက် FB မှာအနိုင်ကျင့်တဲ့ကောင်ကို အပြင်မှာတွေ့တုန်း ဘယ်လိုလက်စားချေခဲ့သလည်းဆိုတော့
ရူပဗေဒနိယာမသဘောတရားတွေကို ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ပန်းပုရုပ်ထုကြီးများ
MPU E-commerce ကို အင်တာနက်ကနေ ဘယ်လိုလျှောက်ထားမလဲ
အမျိုးသားတွေ နေ့တိုင်း ဒီလိုအမူအကျင့်တွေနှင့် သူတို့ရဲ့ သုတ်ရည်၊သုတ်ပိုးတွေကို ဖျက်ဆီးနေမိပါတယ်တဲ့
Detox water သောက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ Detox Water ပြုလုပ်နည်း